कोरोनाबाट मृ`तक लाशको आँखा लगायतका अंग नै गायब भएको देखिए पछि हंगामा ! - Nepali in Australia
October 7, 2020 October 9, 2020 adminLeaveaComment on कोरोनाबाट मृ`तक लाशको आँखा लगायतका अंग नै गायब भएको देखिए पछि हंगामा !
लाशलाई अस्पतालले निक्कै दर्बिलोसँग प्याक गरेको थियो । तर लाश घरमा लाशलाई मुसाले कोतरिदियो । त्यो देखिपछि मृतकका परिजार र आफन्छले हंगामा मच्याए । अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकमाथी मृतकका परिवारीले गम्भीर आरोप लगाए । जानकारी अनुसार इन्दौरको यूनिक हस्पिटलमा यस्तो घट`ना भएको हो ।
त्यहाँको विनय नगर जन कोलोनीमा रहने एक बृ`द्धको चार दिन पहिलेदेखि उपचार भइरहेको थियो । उनी आइतबार बिहानसम्म ठिकठाक थिए । तर अस्पतालले अचानक सूचना दियो की उनको त मृत्यु भइसक्यो । परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अन्तिम संस्कारका लागि लाश बुझाउन अस्पताल बोलाइयो ।
तपाईलाई बताउ की इन्दौरको एमवई अस्पतालमा यही महीना यस्ता लापरवाही दुई पटक भन्दा बढी भइसकेको छ । अस्पतालको गम्भीर कमजोरीका कारण अरुपनि केही लाशको बेहालत भएको थियो ।
अ’न्तिम बिदाई ! कोरोनाले लग्यो ८३ वर्षका पु’रुष लाई (हेर्नुहोस भिडियो)